Mawduucaagu Wuu Urayaa Maaddaama Ay Ka Maqan Yihiin Walxahaas | Martech Zone
Warbixinta warshadaha ka dib warbixinta ayaa sii wadaysa inay sheegto xaqiiqda ah in ku-habboonaanta shakhsi ahaaneed iyo shakhsi ahaaneed ay yihiin furayaal dhammaystiran oo lagu kordhinayo heerarka beddelashada. Marka maxay haddaba sababta ay kuwa wax ka iibiya waxyaabaha ay u sii wadaan inay qoraan dariiq guud oo la mid ah sida dadka kale oo kale u liitaan? Xalay waxaan ku soo bandhigay goob maxalli ah Sparks dhacdo oo waxaan ugu yeeray:
Nuxurkaaga nuugaya. Sida saxda ah ee aad rabtay.
Ujeeddadayda bandhiggu ma ahayn in la aflagaadeeyo awoodda ay dadku u leeyihiin inay wax qoraan; waxay ahayd in la dhaleeceeyo kartidooda u qoraan nuxurka dhagaystayaashooda. Waxaan marwalba u jeednaa inaan dib ugu laabanno qoritaanka waxyaabahaas waan rumaysanahay waa muhiim, laakiin taasi waxay ku xiran tahay oo keliya qayb ka mid ah dhagaystayaasheena guud.
Dhibaatadeenu waa in dhagaystayaasheena ay kala duwan yihiin. Laba rajo oo leh qaab isku mid ah waxay lahaan doonaan habab badan oo kala duwan oo lagu hormarinayo xiriirka shirkadaada. Uma jeedno inaan tixgelin siino taas.
5 Qodob oo lagu Kordhinayo Mawduucaaga
Kordhinta Garashada - adoo kudarsanaya sawir, maqal, ama muuqaal waxaad kordhin doontaa saameynta iyo garashada maqaalka aad qoreyso.
Samee Shareable - wanaajinta waxyaabaha si loo dhiso qiimaha akhristayaasha haddii ay la wadaagaan waa istiraatiijiyad la yaab leh. Ka caawi akhristayaasha inay kobciyaan shabakadooda, ka caawi inay akhristayaashu kor u qaadaan aqoonsigooda, ka caawi inay akhristayaasha ka qaybqaataan inay la wadaagaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin beeshooda, ama u sheegto sababaha ay la wadaagi doonaan maxaa yeelay waxay daryeelaan.
Go'aannada Taageerada - Akhristayaasha qaarkood waxaa saameyn ku leh kalsoonida, xaqiiqooyinka, wax ku oolnimada, shucuurta isku dhafan ee ay leedahay. Waxyaabaha isku dheelitiran ee ka kooban dhammaan waxyaabahan waxay ku xirmi doonaan akhristayaal badan.
Waxqabadka qancinta - waxaa ka mid ah waxyaabaha wada kalsooni - isku xirka, isu-celinta, isku-raacsanaanta, yaraanta, joogtaynta, iyo awoodda.
Shakhsi ahaan - dadku noloshooda ma daaraan oo ma damiyaan markay shaqada yimaadaan ama ka baxaan. Iibsashada ganacsiga waxaa saameyn ku leh asxaabta, qoyska, iyo horumarka shaqsiyadeed. Iibsashada shakhsi ahaaneed waxaa saameyn ku leh shaqadaada. Baabuur iibsiga, tusaale ahaan, waxaa saameyn ku yeelan kara walaaca masaafada gaaska ee safarada dhaadheer.
Xaalad ahaan, waxaan dib u eegis ku sameynay shirkad e-commerce ah shalay. Waxay leeyihiin haynta macaamiisha oo layaableh iyo sicir baddal sarreysa, laakiin waqti ka dib waxay ku adkaadeen inay helaan macaamiil cusub. Markii aan la sheekaysanay iyaga, waxa ugu horreeya ee ay noo sheegeen waxay ahayd sida gaarka ah ee shirkadoodu u ahayd. Waxay ahaayeen kuwo ku saleysan 100% Mareykan ah. Inta badan waxyaabaha ay soo saaraan waxay ahaayeen kuwo Mareykan laga sameeyay (maaddooyinka qaar halkaan lagama heli karin). Waxay kajawaabeen taleefannadooda taleefan kasta. Waxayna dhisaan bakhaarkooda 100% ku shaqeeya cadceedda!
Waan ogahay inay tani tahay xaalad aad u xun, laakiin wax kasta oo ay ku faanaan shirkadooda way adkayd ama wax aan macquul ahayn in laga helo websaydhkooda! Ka waran haddii aan ku beddelno waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxyaabaha soo socda:
Kudar image xarunta si ay u saameeyaan booqdaha isla markii ay yimaadaan goobta.
La wadaag news helitaanka madax-bannaanida tamarta. Mas'uuliyadda bulshada iyo deegaanka ayaa ah sabab ay akhristayaal badani la wadaagi doonaan.
Ku dar xaqiiqooyinka warshadaha, sawir-qaadista, waraaqaha caddaaladda, markhaatiyada, iyo daraasadaha kiiska si ay uga caawiyaan taageerada martida ' go'aannada.
Macaamiilku wuxuu horey u haystaa maraakiib bilaash bilaash ah iyo qiimo dhimis. Waxaa laga yaabaa in lagu daro taariikhda uu dhacayo xoogaa qofka ka dhaadhicin karto iyadoo la soo bandhigo dhib yar.
Dadkani waxay ahaayeen kuwo xamaasad leh! Maxaa diidaya in lagu daro fiidiyowyo ka faa'iideysanaya taariikhda shirkadda, adeegga macaamiisha ee cajiibka ah, iyo qaar ka mid ah astaamaha gaarka ah ee shaqaalaha? Ku xiridda shaqsi ahaan iyadoo dhagaystayaashu ay wadi doonaan beddelaad.
Mar labaad, waxaad aaminsan tahay inay muhiim u yihiin badeecadaada ama adeeggaaga daruuri maahan waxa macmiilkaagu aaminsan yahay inuu muhiim yahay. Hay'addeena ayaa sida caadiga ah diiradda saareysa beddelaadda. Laakiin mararka qaarkood macaamiisha ayaa aad u xiiseynaya tayada nuxurka aan bixinno. Taasi waa wax ay tahay inaan maskaxda ku hayno inta aan qoreyno waxyaabaha kor u qaadaya shirkadeena!
Tags: garaadkago'aan qaadashadashakhsi ahaaneedkalsooniwadaagid